ဂျပန်အစားအစာကို မြည်းစမ်းကြည့်ကြပါစို့ | Japan Care Worker Guide
ဂျပန်အစားအစာဟုပြောလိုက်သည်နှင့် “ဆူရှီ”၊ “ရာမန်ခေါက်ဆွဲ”၊ “တန်ပူရာ” တို့ကို ပြေးမြင်မိကြမှာ မဟုတ်ပါလား။ နောက်ပြီး ဂျပန်ကိုသွားရမည်ဆိုလျှင် ဂျပန်အစားအစာတွေချည်းပဲ စားရမှာလား? ဆိုပြီး စိုးရိမ်မိကြလိမ့်မည်ထင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့် ဘာသာရေးကြောင့် အချို့အစားအစာများစားမရသောသူများမှာလည်း ဂျပန်နိုင်ငံ၏နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကို စိတ်မအေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရပ်တည်ခဲ့ဖူးသော နိုင်ငံခြားသားများထံတွင် စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း၊ အင်တာဗျူးမေးမြန်းခြင်းများမှတဆင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏စားသောက်မှုပုံစံနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်း ကြည့်ခဲ့ပါသည်။
“ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အစားအသောက်တွေက အကုန်လုံးဂျပန်အစားအစာတွေချည်းပဲမဟုတ်ပါဘူး။ ဂျပန်ကို ရောက်လာပြီး အစားအသောက်ကိစ္စအခက်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံခြားသားနဲ့တော့ အခုထိ မတွေ့ဖူးသေးပါဘူး။ ဂျပန်မှာဆိုရင် ငါးတွေချည်းပဲစားတတ်ကြတယ်လို့ ထင်မြင်တာမျိုး ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်မှာတော့ အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး။ အထူးတလည်ပင်ပြောစရာမလိုအောင် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တွေမှာ လမ်းလျှောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အမျိုးအစားစုံလင်လှတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေ ရှိတဲ့အပြင် ၂၄နာရီစတိုးဆိုင်တွေနဲ့ စူပါမားကတ်တွေမှာလည်း များပြားစုံလင်လှတဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာတွေ အစီအရီရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ မည်သည့်နိုင်ငံကလာခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ခံတွင်းတွေ့ မယ့်အစားအစာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါတွင်သာမက ဂျပန်အစားအစာ လို့ဆိုပေမယ့်လည်း ရွေးချယ်စရာဟင်းအမယ်တွေအများကြီးရှိပြီး အရမ်းအရသာရှိတဲ့အတွက် တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးစမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်” ဟု မွန်ဂိုမှဂျပန်နိုင်ငံကိုလာခဲ့သော မစ္စ အန်နာ ဘာယာ ရန်ချင်ခိုရိုက ပြောပြပေးခဲ့ပါသည်။
နီပေါနိုင်ငံမှ ဂျပန်ကိုသွားခဲ့သော မစ္စတာ မာနီ ဂယာဝါလီက ဂျပန်နိုင်ငံ၏စားသောက်မှုပုံစံကို အားရ ကျေနပ်ခဲ့သည်ဟုထင်ရပါသည်။ “စားသောက်ကုန်ကြမ်းများစွာကို စူပါမားကတ်တွေမှာ ဝယ်လို့ရ ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားကကုန်ကြမ်းတွေကိုပါ ရောင်းချပေးနေတဲ့စူပါမားကတ်တွေလည်း ရှိတဲ့အတွက် အရမ်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုင်ပိတ်ချိန်က ည ၈နာရီ-၉နာရီဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် အချိန်မမီတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ ၂၄နာရီဖွင့်လှစ်တဲ့ စတိုးဆိုင်တွေမှာ မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်း အနည်းအကျဉ်းလောက်ကိုပဲဝယ်ပါတယ်။ မိခင်နိုင်ငံကအစားအစာတွေနဲ့ အရသာအနီးစပ်ဆုံးတူအောင် စားသောက်ကုန်ကြမ်းနဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနေပေမယ့်လည်း အနီးနားကစူပါမားကတ်မှာ ဝယ်လို့မရတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ အွန်လိုင်းကနေဈေးဝယ်ပါတယ်။ ဂျပန်ရဲ့ အွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေမှာ အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချပေးနေတဲ့အတွက် နေထိုင်ရတာအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။” ဟု ပြောပြပေးခဲ့ပါသည်။
အခြားနိုင်ငံများနှင့်အလားတူစွာပဲ ဂျပန်အစားအစာနှင့်ပတ်သက်၍လည်း လိုက်နာရမည့် အမူအကျင့်အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာများမှာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့် သူများသည့်အတွက်ကြောင့် မှန်ကန်သောစားသောက်မှုအမူအကျင့်များကို သိထားလို့ အရှုံးမရှိပါဘူး။
-စားသောက်တဲ့အခါနှုတ်ဆက်ပုံ။ ။ အစားအစာမစားသောက်မီမှာ “သုံးဆောင်ပါတော့မယ် (Itadaki masu)” ၊ စားသောက်ပြီးသွားသောအချိန်မှာ “ကျွေးမွေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် (Gochiso sama deshita)” ဟူ၍ လက်အုပ်ချီပြီး နှုတ်ဆက်ပါသည်။
-တူကိုင်ပုံကိုင်နည်း။ ။ သန်သောလက်နှင့်ညှပ်၍ကိုင်မြှောက်ကာ ဆန့်ကျင်ဖက်လက်နှင့် ထိန်းမ,ရင်း တူကိုကိုင်ပါမည်။ ယခုခေတ်မှာဆိုလျှင် ဗီဒီယိုများနှင့်ရှင်းပြထားတာတွေလည်း အများကြီးရှိသည့်အတွက် “How to use chopsticks” ဆိုပြီး ရှာကြည့်လျှင်လည်းကောင်းပါလိမ့်မည်။ နောက်ပြီး ထမင်းထဲမှာတူကို စိုက်ပြီးထိုးထားတာဟာ မပြုလုပ်အပ်သောအမူအကျင့်ပါ။
-ဟင်းပွဲချပုံချနည်း။ ။ ဂျပန်အစားအစာဟင်းပွဲများချပုံချနည်းမှာလည်း စည်းကမ်းဥပဒေသများစွာ ရှိပါသည်။ ထိုအထဲကမှ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးဘယ်ဖက်အခြမ်းမှာ ထမင်း၊ ညာဖက်အခြမ်းမှာ မိဆိုး ဟင်းရည်ဆိုတာကို မှတ်သားထားပါ။ ပြောင်းပြန်ချမိလျှင်တော့ သေဆုံးပြီးသားလူအတွက် ပူဇော်သော ဟင်းပွဲချနည်းဖြစ်သွားမှာပါ။
တစ်ဖက်မှာလည်းပဲ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှာတော့ မပြုလုပ်အပ်သောအမူအကျင့်ဖြစ်နေပေမယ့် ဂျပန်မှာတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်တာတွေလည်းရှိပါသေးသည်။ ဥပမာ- ရေနွေးကြမ်း၊ မိဆိုးဟင်းရည်၊ ခေါက်ဆွဲနှင့် ရာမန်တို့ကိုစားသောအချိန်မှာ အသံထွက်ပြီးစားလည်းပဲ ဂျပန်မှာကတော့ ဒါဟာ မပြုလုပ်အပ်သောအမူအကျင့်မဖြစ်ပါဘူး။ ဂျပန်လူမျိုးများက တရှူးရှူးနှင့်အသံကျယ်ကြီးမြည်ပြီး ခေါက်ဆွဲစားနေတာကိုလည်း တအံ့တသြမဖြစ်ပါနှင့်။
အထက်မှာပြောပြခဲ့သောအကြောင်းအရာများကတော့ အစားအစာစားသောက်ချိန်မှာ လိုက်နာရမည့် အမူအကျင့်နှင့်ပတ်သက်၍ တစ်စိတ်တစ်ဒေသလောက်ကိုသာ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်အစားအစာများ၏အမူအကျင့်များဟာ အသေးစိတ်ပြီး အရေအတွက်လည်းများပြားသည့်အတွက် ဂျပန်ကို မသွားခင်မှာ ရှာဖွေလေ့လာထားပြီး လက်တွေ့မှတ်မိအောင်လုပ်ထားတာ ကောင်းပါလိမ့်မည်။
ဘာသာရေးကြောင့် အစားအစာမှာ အခက်တွေ့ခဲ့တာမျိုး မရှိဘူးလား?
ဟျောဂိုးစီရင်စု၏ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အင်ဒိုနီးရှားမှ မစ္စ ရစ္စဝန်တီက “ဂျပန်ကိုမသွားခင်က အစားအသောက်ကိစ္စကို စိုးရိမ်နေခဲ့ရတာ။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဖြစ်တဲ့အတွက် စားလို့မရတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။ ဟလာလ်စားသောက်ကုန်တွေကို ဝယ်လို့ရပါ့မလား၊ နောက်ပြီး ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲလို့ စိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုစိုးရိမ်နေတာတွေလည်း အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံဖွားဖြစ်ပြီး ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ စီနီယာဆီမှာ မေးခွန်းမျိုးစုံမေးကြည့်လိုက်တော့မှ ဖြေရှင်းသွားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဂျပန်မှာ ဟာလာလ်စားသောက်ဆိုင်တွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အပြင် ပြည်ပကတင်ပို့တဲ့စားသောက်ကုန်ဆိုင်တွေလည်း ရှိတဲ့အတွက် အစားအသောက်ကိစ္စမှာတော့ ဆိုသလောက် အခက်မတွေ့ခဲ့ပါဘူး” ဟု ပြောပြပေးခဲ့ပါသည်။ နောက်ထပ် နီပေါမှ မစ္စတာ မာနီ ဂယာဝါလီက “စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ကိုယ်မစားတဲ့အစားအစာတွေကို ကြိုတင်ပြောပြထားမယ် ဆိုရင် အဲဒါကိုဖယ်ပြီးချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ အရမ်းကို သဘောကောင်း ပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာကတော့ ဂျပန်အစားအစာဆိုင်တွေရဲ့ ဟင်းအမယ်စာရင်းက တခါတလေ ခက်ခက်ခဲခဲတွေ ရေးထားပြီး ဟင်းလျာရဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေကိုနားမလည်လို့ အခက်တွေ့ခဲ့ရ တာမျိုးတော့ အကြိမ်ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောပါသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် “ဂျပန်လူမျိုးများ၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာ အစားအသောက်ယဉ်ကျေးမှု” တစ်ရပ်အနေနှင့် “ဂျပန်အစားအစာ”ဟာယူနက်စကိုမှာ ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ် စာရင်းသွင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ဂျပန်မှာစတင်နေထိုင်ပြီဆိုသည်နှင့် တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ဂျပန်အစားအစာများကို မြည်းစမ်းကြည့်ပါ။ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာတော့ ဟင်းအမယ်တွေကို ခုထက်ထိဂျပန်ဘာသာနှင့်သာ ရေးသားထားသော နေရာများလည်းရှိသည်ဆိုပေမယ့် အဲဒါကလည်း ဂျပန်စာလေ့လာမှုတစ်ခုပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နယ်ဒေသများမှာ နယ်မြေဒေသဟင်းလျာများလည်း အများကြီးရှိပါသေးသည်။ ဂျပန်ကိုသွားရသည့် ပျော်ရွှင်မှုများထဲမှတစ်ခုအနေဖြင့် “အစားအသောက်” ကို ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်ပါ။